လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ၏ (၂၇/၂၀၁၉) ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပ – Yangon Hluttaw
Home / ကျောမတီ/ကျောမရှငျမြား၏ သတငျးမြားး / လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ၏ (၂၇/၂၀၁၉) ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ၏ (၂၇/၂၀၁၉) ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပ
Ygn Editor July 30, 2019	ကျောမတီ/ကျောမရှငျမြား၏ သတငျးမြားး, ကျောမတီ/အဖှဲ့ / အသငျး, ဒုတိယအကွိမျ (၂၀၁၅-၂၀၂၀)3Comments 136 Views
ရန်ကုန် ၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက် ၊ ၂၀၁၉
၃၀.၇.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀း၀၀)နာရီအချိန်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ၏ (၂၇/၂၀၁၉)ပုံမှန်အစည်းအဝေးအား ကော်မတီရုံးခန်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အေးအေးမာ၊ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သစ်သစ်မြင့်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ရနျကုနျ ၊ ဇူလိုငျလ ၃၀ ရကျ ၊ ၂၀၁၉
၃၀.၇.၂၀၁၉ ရကျနေ့ နံနကျ (၁၀း၀၀)နာရီအခြိနျတှငျ ဒုတိယအကွိမျ ရနျကုနျတိုငျး ဒသေကွီးလှတျတျော လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားစိစဈရေးကျောမတီ၏ (၂၇/၂၀၁၉)ပုံမှနျအစညျးအဝေးအား ကျောမတီရုံးခနျး၌ ပွုလုပျခဲ့ရာ ကျောမတီဥက်ကဋ်ဌ ဒျေါအေးအေးမာ၊ အတှငျးရေးမှူး ဒျေါသဈသဈမွငျ့နှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြား တကျရောကျခဲ့ကွပွီး ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ဆားနှငျ့ဆားထှကျပစ်စညျး ဆိုငျရာဥပဒနှေငျ့ ပတျသကျ၍ ဆှေးနှေးခဲ့ကွပါသညျ။
Previous တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ အမြိုးသားပွညျသူ့ကှနျဂရကျမှ ဟူပပွေညျနယျ၊ ရှနျးယနျမွို့၊ မွို့တျောဝနျ Mr.Qie Yingcai ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အားလကျခံတှဆေုံ့
Next လူမှုရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီမှ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ ကုတင်(၅၀) ဆေးရုံနှင့် (၁၆)ကုတင် တိုက်နယ်ဆေးရုံ (၂)ရုံကိစ္စ
Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post and the rest off the website is also really good.
I have read so many content concerning the blogger lovers except this article is reallyafastidious paragraph,